Joe Biden: Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Joe Biden: Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin...
Paul Hariss, gabadhiisa Rose Patton iyo carruurteeda.
Todobaadkii la soo dhaafay, BBC-da ayaa baaritaan ku samaysay xog dhawaan la ogaaday oo tilmaamaysa in xiriir dhanka abtirka ah uu Madaxweynaha Maraykanka, Joe Biden, la leeyahay England. Tan iyo markaa, qoys degan England ayaa sheegay in ay qaraabo yihiin madaxweynaha.
Muddo 20 sano ah, Paul Harris, ayaa ku mashquulay inuu u kuurgalo taariikhda. Waxaa u suuragashay in uu isku duwo xog ku saabsan abtirkiisa.
Waxa uu wax badan ka ogaaday ayeydii, Kathleen Mary Brooks, iyo hooyadeed Ann Maria Davies.
Kadib waxa u soo baxday in magaca Biden uu meel ka soo galo qoyskiisa. Mudnaan ma uusan siin arrintaas ilaa maalin kamid ah sanadkii hore ay gabadhiisa Rose Patton ay si aan ku talagal ahayn u tiri hadal micno badan u sameeyay.
Sow ma aha wax layaab leh haddii aan qaraabo noqono Joe Biden?” ayay tiri Rose oo ka hadlaysa madaxweynaha cusub ee markaa loo doortay Maraykanka.
Harris oo la yaabay hadalkaas ayaa sheegay in uu eegi doono arrinkaas. Baaritaanka uu sameeyay ayaa waxa uu ku ogaaday in xiriir xooggan uu ka dhexeeyo madaxweynaha iyo reer ay qaraabo yihiin oo ku nool Westbourne, oo ah tuulo ka tirsan Galbeedka Sussex ee England.Waxa kadib waxaa u soo baxday arrin cajiib ah: in Harris ay ilma abti shanaad yihiin Madaxweyne Biden.
Sida ay qaraabo u yihiin labada qoys
Harris oo ah 60 jir ku shaqeeya software-ka ayaa ku doodaya in madaxweynaha ay qaraabo ka yihiin dhanka ayeydii saddexaad oo lagu magacaabo Emily Biden.
Waxa ay ku nooleyd Westbourne, oo ay qoyskeeda ku noolaayeen jiilal badan. Xubnaha qoyskeeda waxaa kamid ahaa adeerkeed William Biden, oo la rumaysan yahay in horraantii 1800 uu u guuray Maraykanka.
Harris ayaa BBC-da la wadaagay dukumiintiyo muujinaya dhalashooyinka qoyskiisa, guurka iyo xogta tirakoobka si uu u muujiyo xiriirka qoys ee kala dhexeeya Madaxweynaha Maraykanka.
Harris iyo gabadhiisa Rose ayaa dhowr jeer booqday Westbourne si ay xog badan uga helaan xabaalasha qoyska Biden, balse ma aysan helin halka ay ku aasan yihiin.
Carruurta Rose ayaa aad ugu farxay arrinkan cusub, waxaana ay jeclaan lahaayeen in xiriirka ehelnimo uu aqoonsado Madaxweyne Biden.
“Waxa ay carruurta sugayaan in lagu martiqaado Aqalka Cad,” ayuu yiri Harris.
Ka hor inta uusan madaxweynaha noqon, Biden ayaa dhowr jeer booqday dad ehelkiisa ah oo ku nool Jamhuuriyadda Ireland oo ay ka soo jeedaan awoowayaashiisa ugu caansan.
Ma cadda inta ay gaarsiisan tahay aqoonta uu Madaxweyne Biden u leeyahay xiriirka ehelnimo ee uu shaacisay Harris, inkastoo BBC-da ay arrintaa u badan dhigtay Aqalka Cad, balse aanu weli ka jawaabin.
Rose ayaa aabaheed Harris ku boorisay in uu warqad u qoro Madaxweyne Biden.
“Wax wanaagsan ayay noqon lahayd haddii carruurteydu helaan wax ku saabsan xiriirka, ayna la sii wadaagi karaan ubadkooda,” ayay tiri Rose Patton
Next articleIn Muslimiinta caalamka ay xajka ka baaqdaan ma ka mid tahay caalamadaha qiyaamaha?